राति सुत्नु अगाडि नियमित रुपमा ल्वाङ १० दिन सम्म खानुस । पाउनुहुनेछ यस्तो चमत्कार ।जानिराखौ ! – Sanjal Nepal
Homeस्वास्थ्य /जिबनशैलीराति सुत्नु अगाडि नियमित रुपमा ल्वाङ १० दिन सम्म खानुस । पाउनुहुनेछ यस्तो चमत्कार ।जानिराखौ !
राति सुत्नु अगाडि नियमित रुपमा ल्वाङ १० दिन सम्म खानुस । पाउनुहुनेछ यस्तो चमत्कार ।जानिराखौ !
November 9, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 15469
काठमाडौँ । आयुर्वेदिक औषधि एवं उपायले एन्टिफंगल, जीवाणुरोधी, एन्टिसेप्टिक, एवं एनाल्जेसिकका रूपमा काम गर्दछ।
यिनैमध्ये एक हो ल्वाङ, जुन फ्याटी एसिड, फाइबर, भिटामिन, ओमेगा-३ एवं खनिजको राम्रो स्रोत हो। यसले हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढाउने काम गर्छ।
दैनिक खानपानमा मसलाको रूपमा प्रयोग गरिने ल्वाङलाई आयुर्वेदमा औषधिको रूपमा महत्व दिइन्छ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
राति सुत्नुअघि नियमित ल्वाङ सेवन गर्दा १० दिनभित्रै यसको फाइदा महसुस गर्न सकिन्छ । सुत्ने बेलामा ल्वाङ खाँदा शरीरमा आश्चर्यजनक फाइदा देखा पर्छ ।
तपाईंले ल्वाङमा चाउरी परेको वा चिरा परेकोजस्तो पाउनुभयो, पुष्ट पाउनुभएन भने सम्झनुस् कि त्यसबाट तेल निकालिएको छ ।
त्यसलाई किनेर काम छैन किनभने त्यसले कुनै काम गर्दैन । ल्वाङको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नै यसको तेल हो । तसर्थ तेलयुक्त ल्वाङबाट मात्रै इच्छित स्वास्थ्यलाभ लिन सकिन्छ ।
दाँत दुखाइमा आराम
तपाईंको दाँत दुखेको खण्डमा ५ ग्राम कागतीको रसमा ३ वटा ल्वाङ पिसेर जहाँनेर दुखेको छ ठीक त्यहीँ लगाउनुहोस् । तुरुन्तै आराम मिल्छ ।
अथवा बजारबाट ल्वाङको तेल ल्याएर कपास भिजाएर दुखेको ठाउँमा लगाउँदा पनि राहत हुन्छ । यति पनि नभए ल्वाङलाई नै दुखेको ठाउँमै पारेर च्यापिराख्दा पनि केही बेरमा आराम हुनथाल्छ । ल्वाङले दाँतका सबैखाले सं’क्रमण हटाउँछ ।
ल्वाङ निकै कडा रसयुक्त हुन्छ । कुनै पनि प्रकारको घाउ छ भने जैतुनको तेलमा थोरै ल्वाङको तेल मिसाएर घाउमा लगाउँदा घाउ छिटै निको हुन्छ ।
का’टेको वा अन्य चो’टपटक लागेको अवस्थामा ल्वाङलाई पिसेर त्यसमा बेसार मिसाई लगाउँदा चोट चाँडै निको हुन्छ । त्यो पाक्ने सम्भावना रहँदैन।
मौसमी परिवर्तन वा बाहिरी खानपानका कारण घाँटी बस्ने, खसखस हुनेजस्ता समस्या देखा परे १-२ घण्टाको अन्तरालमा एउटा ल्वाङ चपाउने वा त्यसलाई जिब्रोमा राखिराख्नाले घाँटी खसखस हुने वा दुख्ने समस्या हट्छ ।
पेट सफा राख्न
दिनमा २–४ वटा ल्वाङ चपाएर खानाले पूरै दिन ताजापन महसुस हुनाका साथै पेट पनि सफा रहन्छ। नियमित ल्वाङको सेवनले हरेक दिन पेट खलास हुन्छ।
इम्युन सिस्टम वृद्धि
ल्वाङमा इम्युन बुस्टर हुन्छ जसले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ । ल्वाङको नियमित सेवनले कमजोरी हट्छ ।
कतिपयमा हातगोडा काम्ने समस्या हुन्छ । यस्तो समस्या छ भने हरेक रात सुत्नुअघि १–२ वटा ल्वाङ चपाएर खानुपर्छ । केही दिनपछि हातगोडा काम्ने समस्या निर्मूल हुन्छ ।
टाउको दुखेको छ घरमा अन्य औषधि छैन, भनेपछि के गर्ने ? यस्तोमा २–३ वटा ल्वाङ पिसेर मनतातो पानीसँग स्वाट्ट पिइदिनुपर्छ । केही बेरपछि नै राहत महसुस हुन्छ।
कतिपय मानिसको आँखाको सेतो भागमा समस्या हुन्छ जसका कारण उनीहरूको दृष्टि कमजोर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तामाको भाँडामा ल्वाङ पिसेर त्यसमा थोरै मह मिसाई खानुपर्छ। फाइदा गर्छ।
यति धेरै गुण भएर पनि ल्वाङको बढी सेवन हा’निकारक हुन्छ । यसको प्रकृति गर्मी खालको हुन्छ । तसर्थ यसको सेवन गर्नुअघि आयुर्वेदिक विशेषज्ञसँग परामर्श लिनु राम्रो हुन्छ।
December 16, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 6050
April 11, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 4438
नायिका प्रियंका कार्कीले केही दिनअघि आफू गर्भवती बनेको ‘खुलासा’ गर्दै ठूलो पेट देखाएर तस्बिर पोष्ट गरिन् । उनले उत्साहका साथ पोष्ट गरेको तस्बिरमा धेरै नकारात्मक कमेन्टहरु आए । तर, हतोत्साही नभइकन प्रियंकाले दिनहुँ आफ्नो ‘बेबी
November 2, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 8726
एजेन्सी । मोटो हुनु अचम्मको कुरा होइन तर शरिरले थाम्न नै नसकिने गरि मोटाउनु चाँहि अचम्मको कुरा हो । १९३ किलो तौल रहेका आर्या परमाना जो संसारकै मोटो बालक भनेर चिनिन्छन् उनले १०८ किलो तौल
LEX 18 agenda conversation: Job club (544605)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (515055)
Hello world! (436016)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (398463)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते सोमबारको राशिफल (109056)